Gadashada A Guide Mountain Bike - Rule News
Gadashada A Guide Mountain Bike
Waxay noqon kartaa xoogaa niyad sidoo kale waqti marka aad iibsato a baaskiil buurta.
Hoos, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah talooyin iyo wax in laga war hayo ka hor inta aadan la jiifsatay lacag caddaan ah iyo baaskiil buur iibsato.
Go'aaminta aad qiimo
run ahaantii waxaa jira xad lahayn sida in inta lacag ee aad ka isticmaali karto on baaskiil buurta cusub. Si aad u caawiso inaad dhawrtaan kharashka ka taliso, waa in aad xisaabiso waxa kala duwan oo qiimo aad tahay iyo sida badan ee aad diyaar u ah inay bixiso baaskiil cusub.
Marka aad soo iibsato, Waa in aad ka iibsan dukaamada baayacmushtariga mass sida Wal-Mart. halkii Waa in aad taageero aad dukaanka baaskiil maxalliga ah iyo hesho baaskiil aad u fiican iyo adeegga aad u fiican.
Helitaanka aad style
All baaskiilada buurta waxaa loogu talagalay dhowr Hababka saaran gaadiid kala duwan iyo noocyada dhul ku hay. Waxaad u baahan doontaa in aad ogaado nooca fuushan laguu ugu samaynaya doonaa. fardaha siman, tartanka dalka cross, saaciday inay buurta, ama kor u heli mid marwalba waa wax aad u baahan tahay inaad ogaato. Hubi in baaskiil aad dooran haboon aad style shaqsi ah oo aan in ka mid ah shaqaalaha iibka ee.
ganaax Full ama dabada adag
Haddii aad awoodi kartaa, baaskiil buurta ganaax buuxa had iyo jeer waa qiimo iibka. dabada A adag, oo aan ganaax gadaal, waa miisaanka badan shido iyo baydalka more hufan, inkastoo ganaax buuxa bixiyaan raaxada badan oo guud ahaan ay gacanta ku fiican. Waxaad u baahan in la sameeyo go'aan in ku salaysan kala duwan oo qiimo aad, style fardaha, iyo nooca dhul doonaa laguu fuushan ugu.
Helitaanka cadcad aad
Isbarbar baaskiilada buurta qayb qaado qayb ka yahay ku dhowaad aan macquul aheyn, maadaama ay jiraan isku aad u tiro badan la heli karaa. Habka ugu fiican si ay u tagaan oo ku saabsan waxan u samaynaysaan waa raadinta ah qaybaha yar in ay yihiin kuwa ugu muhiimsan adiga iyo in la hubiyo inta kale ama ugu yar gudahood kala duwan oo qiimo aad u dhaco. Waxaad bilaabi kartaa fargeeto ka dibna eegto giringirihii iyo derailleur gadaal.
Sales iyo xilliyo
Sanadkan gudihiisa, sicirka baaskiilada buurta is beddelid kartaa yara xad ah. Spring marayo xagaaga waa xilli weyn gadashada. Haddii aad sugi kartid ilaa qiimaha saxda ah soo booda, sida caadiga ah ee dayrta iyo jiilaalka, waxaad badbaadin kartaa laba boqol oo doolar. dukaamo badan oo baaskiil sidoo kale bixin doonaa qiimo dhimis ama accessories kale haddii aad ka soo iibsato.
Helitaanka dealer wanaagsan
Helitaanka a dealer baaskiil wanaagsan ka muhiimsan yahay helidda qiimaha ugu fiican. Waa in aad had iyo jeer ka heli dealer in dan ka badan adiga kugu saabsan iibinta baaskiil weyn ka badan inta aad iska iibiso mid ka mid ah sare jaban. dealer A weyn yeelan doontaa dukaan dayactir nadiif ah oo aad siin aragti ah in aad dhabtii iyaga aamini karaan.
Waa in aad tijaabiso baaskiil badan intii aad awoodid gudahood kala duwan oo aad u qiimo iyo style fardaha.
Waxaad ka heli doontaa in qaar ka mid ah baaskiilada dareemi doontaa xaq u, halka qaar kalena maayo. The baaskiilada dheeraad ah waxaad tijaabin kartaa drive, aad si fiican aad fahmi doonaa waxa ka shaqeeya iyo waxa aan sameeyo.
dib u eegista iyo dib u eegis Product baaskiil yihiin qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee si aad u ogaato oo ku saabsan a baaskiilada buur isku halaynta iyo waxqabadka guud. Waa in aad had iyo jeer eegaan waxa milkiilayaasha iyo dib u eegista kale qabaa ku saabsan baaskiil ka hor intaadan in iibka final.
Marka aad ka fikirto Windows Phone Fiiri ah oo wuxuu galay kr Kuwani ...
3 tallaabooyin sahlan si aad u hesho in kaamil ah tan la isticmaalayo is ta ...
Waxyaabaha aad cabsiiyo, Laakiin u qalantaa
14718	0 Bicycle, Baaskiil, geerka Derailleur, degmada Doorashooyinka (Canada), Mountain baaskiilka, baaskiilka Mountain, Sports, Walmart
← Kulan Jack Russell Pit A Dog in Mid ka mid ah Pack tattoo – Doorashada Your Design Dream →